आत्मा र परमात्माको सम्बन्धको खोज ! – Himalitimes
२०७७ भाद्र २३ १७:४६ मा प्रकाशित
हरेक बस्तुको आउने ठाउँ र जाने ठाउँलाई हेर्दा सबैको नै पाईन्छ । जस्तै जहाँबाट आयो त्यहीँ जानू पर्ने हरेक बस्तुमा एक समानकै प्राकृतिक नियमलाई बिचार्दा र हाम्रा धर्म ग्रन्थहरुमा त्यही नै उल्लेख पाइन्छ। जस्तै बर्षदेखि खोला नदि आदिको पानी सागर मै जानू पर्ने नियम अनुरुप यो सारा पन्चतत्व बाट बनेजती सबै सबै त्यहीँ मिल्नु पर्ने बाध्यता छ । यो आत्मा पनि परमात्मा बाट आएको हुदा यस्लाई पनि त बाध्यताले छोड्दैन होला नि? तर, सतप्रतिशत पानी सागरमा पुग्न नपाए जस्तो सत्कर्म बिना त यो आत्मा पनि प्रभु सङ्ग मिल्ने निस्चितता छ त? त्यस्कालागी त हरेक जीवलाई सत्कर्म को जरुरत पर्यो पर्यो ।
फेरि शरीर दृष्य र आत्मा अदृश्य भए जस्तै सत्व पनि अदृश्य नै त छ । जस्तै मिठा बस्तु खाँदा हुने मीठो पनाको अनुभव पनि त अदृश्य नै त हो नि । त्यस्तै, भगवान पनि अदृश्य भएर पनि मिठासको पुर्ण बिन्दु हुनुहुन्छ आत्माको सागर स्वरुप ।
जो जहाँबाट आयो त्यहीँ जानू पर्ने बाध्यता। हरेक बस्तुलाई नै अकाट्य भएबाट हिमाल चड्ने मानिसहरु लाई कति कति लाई हिम पहिरोले पुरेको, कति कति लासहरुको रस खोलानाला हुँदै सागर मै पुगेको पक्कै छ। अनि यो धर्तीमा पशु प्राणी देखि सारा मानिसले मारेका मैला जाने ठाउँ सागर नै हो। अनि मानिस ले खाने पानी को श्रोत पनि त्यही सागर नै हो। फेरि त्यहाँ जल जन्तुहरु अर्कालाई खाइ बस्ने कति होलान? र कतिसम्म फोहोरी बनाउछन? त्यो जानी जानी पनि त्यही पानी पीउनु परेकै छ । त्यसलाई छान्ने क्षमता पनि धर्तीमा कम भईराखेको छ भने अर्कातिर त्यो मैला या मैला पानी खाई धेरै भन्दा धेरै प्रतिसत शुद्ध बनाउने बनस्पति रुख जंगल हरु नै हुन् ।तिनलाई पनि मानिसले आफ्नु जिविकाको भाँडो बनाई काटी बेची उजाड पारी सकेका छन् ।
अब, धर्तीको आयु पनि त्यति लामो देखिदैन्। किनकी जंगलको अवस्था हेर्दा काक्रोलाई थाँक्रो हाले थाँक्रै धनी भएकोले अब आयो प्रकृतिको नियम जहाँ बाट आयो त्यहीँ जानू पर्ने के यो नहोला त? बैज्ञानिकहरुको भनाई अनुसार यो धर्ती र चन्द्रमा पनि सुर्यबाट बिस्फोटन भै आएको भन्ने भनाई छ भने एक दिन धर्ती र चन्द्रमा नै कतै सुर्यमा मिल्ने सम्भाब्यता लाई पनि कस्ले नकार्न सक्ला त?